पढाइ खर्च जुटाउन आँप बे’चिरहेकी बालिकाको १२ वटा आँप २ लाख रुपैयाँमा कसले किनिदिए ? – Yuwa Aawaj
मंगलबार , साउन १९, २०७८
पढाइ खर्च जुटाउन आँप बे’चिरहेकी बालिकाको १२ वटा आँप २ लाख रुपैयाँमा कसले किनिदिए ?
असार १५, २०७८ मंगलबार 694
काठमाडौं : को’रोनाभा’इरस महामा’रीका कारण विद्यालय बन्द भयो । त्यसपछि ५ कक्षाकी विद्यार्थी तुलसी घरमै बस्न बा’ध्य भइन् । विद्यालयले पढाइ सुरु गरेको तुलसीले जानकारी पाइन् तर उनी कक्षामा उपस्थित हुन स’क्दिनथिन् ।
कक्षा अनलाइनबाट च’लिरहेको थियो र यसका लागि तुलसीसँग स्मा’र्टफोन थिएन । त्यसैले स्मार्टफोन किन्ने पैसा जम्मा गर्न उनले सडक कि’नारामा आँप बेच्न थालिन् ।यी बालिकाको कथा समाजिक संजालमा यसरी भाइरल भयो कि उनको सपनाले उडान भर्न पाउने भएको छ ।
बाटोमा आँप बे’च्न बसेकी तुलसीसँग १२ वटा आँप थिए । एक व्यक्तिले उनलाई ती प्रत्येक आँपको १० हजार भा’रतीय रुपैयाँका दरले १२ वटा आँपको १ लाख २० हजार रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ झण्डै २ लाख) दिएर सबै आँप किनिदिए । यी आँप खास आँप पनि थिएनन् ।
तर, पढाइको लागि ती बालिकाको सं’घर्ष देखेर ती व्यक्तिले यति म’हंगोमा आँप कि’निदिएका थिए ।भारती’य मिडियाका अनुसार भारतको झा’रखण्ड राज्यको ज’मशेदपुरमा स्ट्रे’ट
मा’इल्स रोडमा बं’गला नम्बर ४७ को आ’उटहाउसमा बस्ने ११ वर्षकी तुलसी ५ कक्षाकी छात्रा हुन् । उनको परिवारको आर्थिक अ’वस्था कमजोर छ । उनको परिवारले उनलाई पढाइरहेका त थिए तर को’रोनाकालमा स्कुल ब’न्द भए ।
स्कुल ब’न्द भएपछि अनलाइन कक्षा सुरु भयो तर तुलसीको पढाइ भने ठप्प भयो किनकि उनीसँग स्मा’र्टफोन थिएन ।तुलसीले पैसा जुटाउन आँप बेच्न थालिन् ।
उनले आफू बस्ने बंगलाको बगैंचामा फ’लेका पाकेका आँप टिपेर ल्याएर सडकमा बे’चिरहेकी थिइन् । यस क्रममा तुलसीको यो क’हानी सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको यो क’हानी मुम्बइको भ्या’लुएबल ए’डुटेनमेन्ट कम्पनीमा उपाध्यक्ष अमे’या हे’तेसम्म पुग्यो ।
त्यसपछि उनले तुलसीलाई सहयोग गर्न अगाडि आए ।उनले तुलसीका १२ वटा आँप प्रतिआँप १० हजारका दरले १ लाख २० हजारमा कि’निदिए । अब अमेया हेतेले तुलसीको सपनालाई नयाँ उ’डान दिएका छन् ।
तुलसी कहाँसम्म पुग्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यो पैसाबाट लुतसीले १३ हजार रुपैयाँमा स्मा’र्टफोन किनेकी छिन् । बाँकी रकम उनले अ’गाडिको पढाइको लागि राखेकी छिन् । अब भने उनी सडक कि’नारामा आँप बे’चिरहेकी दे’खिन्नन ।
Prevअन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सामान्य ।
Nextबाबुको ला’स नउठ्दै ऋ’ण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ।( हृदयस्पर्शी कहानी)
फेरियो प्रधानमन्त्री ओलीको बोली: अनुमान गरेभन्दा फरक सन्देश…हेर्नुहोस!
कालो अंगुर खानुका ५ फाइदा साथै यी ६ रोगहरु सग लड्न मद्दत गर्छ ।
नेपाली खेलाडी सम्मिलित पाकिस्तानी महिला फुटबल च्याम्पियनसिप रद्द !
सम्पतिको लोभ गर्नेहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति गर्न सक्दैन…हेर्नुहोस् ।
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (15515)
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं ! (6633)
ग्याष्ट्रिकको अचुक औषधी हो मेथीदाना,यसरी प्रयोग गर्नुहोस, बिधि सहित। (5896)
खुशीको खबर : नेपालमा आज ह्वात्तै घटे को’रोना संक्र-मित ।(संख्या सहित) (5429)
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री केपि ओलिले करोडौं रकम दिने घोषणा ।(भिडियो सहित) (5378)
अल्सर बिग्रिए घा’तक हुनसक्छ, थाहा पाउनुहोस् । अल्सरका सात लक्षण र बच्ने उपाय सहित । (5179)
नेपालीलाई भइरहने यी ३ रोग त औषधी नखाइ ठिक हुन सक्छन्- थाहा पाउनुहोस । (4342)